Ama-Stearns ne-Foster Box Spring ngamanani aphelele | Rayson
Single, inkosi eyodwa, igcwele, indlovukazi, inkosi
Iminyaka engu-15 ukusetshenziswa okujwayelekile
Ama-PC ayi-15,000 ngenyanga
I-Flat ecindezelwe + Pallet / Roll Up Carton / Bag
Izinsuku eziyi-15 zokusebenza zokwenza amasampula wesampula, izinsuku ezingama-30 zomsebenzi zokukhiqizwa kwabantu abaningi
Njalo ulwela ukubhekela phambili, iRayyson yathuthuke ukuba yibhizinisi eliqhutshwa yimakethe neligxile kumakhasimende. Sigxile ekuqiniseni amandla okucwaninga kwesayensi kanye nokuqeda amabhizinisi wenkonzo. Simise uMnyango Wezemisebenzi Amakhasimende ukuthi unikeze kangcono amakhasimende ngezinsizakalo ezisheshayo kufaka phakathi i-Order Tracking Isaziso. Ama-Stearns ne-Topy Box Spring Sithembisa ukuthi sinikeza wonke amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kufaka phakathi ama-Stearns kanye ne-Foster Box Spring kanye nezinsizakalo eziphelele. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi, siyakujabulela ukukutshela.it inikeza ukuvikela okuthile kumuntu ogqokayo. Izosebenza njenge-buffer phakathi komzimba womuntu nokushiswa ngengozi, imihuzuko, indawo enolaka, njll.